Kurima munda zvemandorokwati | Kwayedza
26 Nov, 2020 - 13:11	 2020-11-26T13:00:51+00:00 2020-11-26T13:00:51+00:00 0 Views
1) Ripper – disc – roller – planter
2) Ploughing – disc – roller – planter
3) Chisel plough – disc – roller – planter
Nzira dzekurima dzinoti ripping, ploughing kana chisel ploughing dzinopinda pane inonzi (primary tillage), kurima kwekutanga pamunda. Tochiti disking & rolling zvinopinda pane inonzi secondary tillage kurima kunonyatsotsetsenura ivhu munda usati wadyarwa. Varimi vanokurudzirwa kuita imwe chete yenzira nhatu idzi kamwe chete pamakore maviri kana matatu kwete gore rega rega. Tinodaro nekuti nzira iyi inoshandisa 15 – 20% yemutengo unodiwa pakurima. Nzira idzi dzinokonzera kukukurwa kwevhu nemvura kwakawanda nekukanganisa mamiriro evhu (soil structure).